Talooyinka Xiriirka Ee La Qaato Kahor Intaadan Qof Jacayl U Qaadin - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Talooyinka Xiriirka Ee La Qaato Kahor Intaadan Qof Jacayl U Qaadin
Marku qof ka helo qof kale mar kasta waxaa suurtagal ah in qofkaas isaga/iyada uu jacayl qaado.
Had iyo jeer waxaa wanaagsan inaad aqriso qaar kamid ah talooyinka kahor intaadan qofka jeclaan.
Talada waxbadan ayay kaa caawineysaa markay noqoto inaad sameyso go’aano muhiim ah.
Waa kuwaan qaar kamid ah talooyinka la qaato kahor intaadan qof jacayl u qaadin.
Marka hore saaxiib noqda
Kahor intaadan ku boodin shukaansiga qof, mar kasta waxaa wanaagsan oo muhiim ah inaad saaxiibo noqotaan.
Markaad saaxiib noqotaan waxaad heleysaa waqti wanaagsan oo aad ku barato qofkaas adigoo sidoo kale ogaanaya waxa uu jecelyahay iyo waxa uusan jecleyn.
isdeji oo iska ilaali go’aano deg deg ah
Marka qofku ku dhaco jacayl wuxuu u nugulyahay inuu qaato go’aano deg deg ah oo aanan laga fiirsan ama laga fekerin.
Haddii aad qaadato taladaan kahor intuusan jacaylku kugu dhicin ama aadan qofka jacayl u qaadin waxay kugu hagi doontaa sida ugu wanaagsan ee aad waqti u qaadaneyso isla markaana uga fakareyso wax kasta marka ay timaado inaad sameyso go’aano muhiim ah.
Intabadan jacaylku wuxuu si fudud kaaga dhigi karaa indho la’aan isagoona kuu qari kara cilladaha xun xun ee uu qofku leeyahay.
Si kastaba, mar kasta waxaa qofka u wanaagsan inuu feejignaado si aanan hadhoow loo dhaawicin.
Ka feejignoow qofkaad jeclaaneyso oo iska eeg dhaqamada xun ee uu leeyahay si aadan hadhoow u shalaaynin.
Sida Gabadha Aad Jeceshahay Looga Dhigo Mid Si Aada Kuugu Xiisto
Waxyaabaha Lagu Garto In Lamaankaaga Uu Si Dhab Ah Kuu Jecelyahay (Tilmaamahan Ka Eeg)
Farriimo jacayl oo cajiib ah oo loogu talagalay wiilka aad jeceshahay (Udir)